उत्तरआधुनिक ऐना | Online Sahitya
साहित्यिक समालोचनामा नयाँ चिन्तनहरूको व्याख्या गरिरहेका डा. गोविन्दराज भट्टराई प्रायः भनिरहन्छन्, “समालोचक मार्गदर्शक मात्र हैन, समय–दर्शक पनि हो।” सबैले समयसँगै हिँड्नुपर्छ; दौडिन नसक्ने वाद, चिन्तनहरूको अस्तित्व छैन भन्ने निर्क्योल उनको नवीनतम कृति उत्तरआधुनिक ऐना मा अझ स्पष्टताका साथ प्रकट भएको छ। किताबमा नेपाली साहित्यमा नयाँ गति र प्रवृत्तिको विस्तृत लेखाजोखा भेट्न सकिन्छ।
लेखकको मूल्याङ्कनमा नेपाली साहित्य नयाँपन, विचित्रता, बहुलतातिर प्रवृत्त छ। यो गतिमय, विविधतायुक्त, प्रयोगोन्मुख हुँदैछ। सात खण्डमा विभाजित पुस्तकमा त्यही गतिशीलताको सैद्धान्तिक विश्लेषण र प्रयोगात्मक उदाहरणहरूको रोचक संयोजन अनुभव गर्न सकिन्छ। पहिलो खण्ड 'नयाँ सिमाना' मा समाविष्ट पन्ध्र आलेखमार्फत् लेखकले स्रष्टा, समालोचकहरूलाई समयप्रतिको दायित्वबोध गराउन खोजेका छन्। कृतिलाई अनुभवजन्य निष्कर्ष ठान्दै लेखकले भनेका छन्, “मुुगलान (२०३१ सालमा प्रकाशित लेखकको पहिलो कृति) निकालेयताका सबै चिन्ता, अनुभव, ज्ञान र पीर यसैमा उनिएका छन्।” पढ्दा त्यस्तै लाग्छ। समालोचना जस्तो गह्रौँ, चुनौतीपूर्ण विधामा निर्लिप्त डा. भट्टराईले नेपाली साहित्यका नयाँ आन्दोलन, अभियान, स्वतन्त्रतामुखी लेखनीलाई दिल खोलेर हौस्याएका छन् भने केही रुढ मान्यताहरूलाई 'च्याप्नुको अर्थ छैन' भन्दै तीखो आलोचना गरेका छन्, यो कृतिमा। उनले आयामेली आन्दोलनलाई सीधै 'भ्रान्तिवृक्ष' को संज्ञा दिएका छन्। अनि, तेस्रो आयामकै एक अभियन्ता इन्द्रबहादुर राईबाट उद्घोषित 'लीलालेखन' को औचित्य समाप्त भइसकेको ठोकुवा गरेका छन् ।
साहित्यका 'नौल्याइँ' हरूलाई गज्जवले धाप मार्ने र 'अर्घेल्याइँ' हरूको शिष्ट शैलीमा उछित्तो काढ्ने लेखकको आनीबानी किताबमा सङ्गृहीत कृति–समीक्षाहरूबाट स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ। आम पाठकलाई केही बोझिलो लाग्ने समालोचनात्मक आलेखहरूलाई आत्मपरक शैलीमा सुरुचिपूर्ण बनाउने लेखकीय खुबी पुस्तकको उल्लेख्य विशेषता हो। प्रयोग र आधुनिकताले साहित्यलाई गतिशील बनाउने दृष्टिकोण नयाँ नभएपनि लेखकले जुन अडान र प्रतिबद्धताका साथ उत्तर–आधुनिकताको वकालत गरेका छन्, त्यसले नेपाली साहित्यमा नयाँ बहस भित्र्याउने पक्का छ।
किताबः उत्तरआधुनिक ऐना
लेखकः डा. गोविन्दराज भट्टराई
प्रकाशकः रत्न पुस्तक भण्डार, काठमाडौँ, २०६२
पृष्ठः ३४३+, मूल्यः रु.२९५
॰[साभार: हिमाल खबर पत्रिकार]